CASE2Learn Launch and Orientation | ADRA Myanmar | Justice. Compassion. Love
CASE2Learn Launch and Orientation
This week, the CASE2Learn project was launched at the Hilton Hotel, Nay Pyi Taw on the3September 2019 with orientation for the project following til the5September. The CASE2Learn project supports over 300,000 indigenous teachers and students in9States and Regions throughout Myanmar. The European Union funded EUR $20 million project will be implemented between 2019 and 2023 by ADRA Myanmar and its implementing partner RISE 'Rural Indigenous Sustainable Education' with support from ADRA UK and ADRA Germany.
Dr Johann Hesse, EU Head of Cooperation, stated at the launch ceremony: “Guided by the National Education Strategic Plan, the European Union will support ethnic education providers in Myanmar to meet the objective of ‘leaving no child behind.’ We believe that stronger partnerships between the Government and non-governmental education providers will support peace and benefit students in equal measure.”
The CASE2Learn project, also known as ‘Conflict Areas Support for Education2Learn’, is an extension of an 11-month pilot project called CASE+. The aim of the project is to improve and expand indigenous education services by improving school quality standards and equipping indigenous teachers with basic teaching competencies to support student learning. The project will also focus on out of school children, youth and illiterate women by providing relevant programs for support.
Claudio Sandoval, Country Director of ADRA Myanmar, stated: “CASE2Learn is the result of years of committed work and lobbying, not just from ADRA but from donors and local partners combined. The concretisation of this effort and the allocation of funds for expanding Indigenous Education services isagreat example of what can be achieved when donor’s, NGO’s and local partner’s visions are aligned.”
Representatives from the Department of Basic Education, Department of Alternative Education, Department of Technical and Vocational Education and Training, Department of Disaster Management and over 15 organisations supporting Myanmar's education sector were in attendance.
National media stations including MRTV, MITV and Channel7covered the event which was featured on local radio and posted to social media.
During the launch, speeches were provided by; EU Head of Cooperation Johann Hesse, ADRA Myanmar Country Director Claudio Sandoval, Deputy Director General from the Department of Basic Education Dr Tin Maung Win, ADRA Myanmar Program Director John Mubonderi and ADRA UK Senior Programmes Officer Milimo Ninvalle.
Orientation followed the launch event focusing on presentations between select European Union staff, ADRA Myanmar, ADRA UK, ADRA Germany and representatives of the RISE Network. Special guest Operations Manager Pascal Simon from DDG 'Danish Demining Group' also attended to provideapresentation on mine risk awareness in conflict and post conflict areas in Myanmar with hopes of future collaboration.
Topics during Orientation included and were presented by;
Context Overview, Risk Management & Advocacy: RISE Program Director Scott O'Brien and RISE Program Manager Crystal White
Program Overview: ADRA Myanmar Project Director Saw William Po
Donor Compliance: EU Deputy Head of Finance Marja Daffern
Finance & Procurement: ADRA Myanmar Finance & Administration Director Yuba Raj Chaudhary
Partner Capacity Building: ADRA UK Consultant Antonio Belgrave
MAP & CSO Development Effectiveness: ADRA Germany Program Coordinator Anna Krikun
Reporting: ADRA Myanmar Program Director John Mubonderi
Safeguarding: ADRA UK Senior Programmes Officer Milimo Ninvalle
Visibility: ADRA Myanmar PR & Communications Officer Emma McCrow
HR: ADRA Myanmar HR Coordinator Nant Dahlia
Student Centred Learning: ADRA Myanmar Education Specialist Sarah Egan
To learn more about the CASE2Learn project, go HERE
To view the article on the European Union website, go HERE
Translation: Pyae Phyo Lin, Communications Assistant
ဝေးလံခေါင်သီပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ Hilton Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
CASE2Learn စီမံကိန်းကို ADRA UK နှင့် ADRA Germany တို့၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည့် (ADRA) မြန်မာက Rural Indigenous Sustainable Education’ (RISE) Network နှင့် ပူးပေါင်း၍ ့၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်လည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ(EU) က ထောက်ပံ့ငွေ ယူရိုသန်း ၂၀ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ယင်း CASE2Learn စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကိုးခုတို့မှ ဆရာဆရာမများနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုုပေါင်း သုံးသိန်းကျော်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးမြင့်ကျယ်ပြန့်စေရန် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးအတွက် စာသင်ကျောင်းများ၏ အရည်အသွေးစံနှုန်းနှင့် သင်ကြားမှုစွမ်းရည်တို့ တိုးတက်ရေးကို အဓိကဦးတည်ရည်ရွယ်ထားသည်။
စီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဥရောပသမဂ္ဂပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Johann Hesse ကလည်း “ဒီစီမံကိန်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးဆောင်ကျဉ်းပေးရာမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခဒေသတွေမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ ကလေးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်လည်း ရေရှည်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် ဆွေးနွေးမှုတွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို အစိုးရနဲ့ အစိုးရမဟုုတ်တဲ့ပညာရေးဆိုုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းလာစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများအတွက် ပညာရေးအထောက်အကူပြုမည့် Conflict Areas Support for Education2Learn (CASE2Learn) စီမံကိန်းသည် ကျောင်းပြင်ပကလေးများ၊ လူငယ်များနှင့် စာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အမျိုးသမီးများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည်လည်းဖြစ်သည်။
ADRA မြန်မာမှ Country Director ဖြစ်သူ Mr. Claudio Sandoval ကလည်း အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒေသခံဌာနတိုင်းရင်းသားအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကို တိုးချဲ့တဲ့အခါမှာ ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားမှုနဲ့ အလှူရှင်၊ NGO အဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးညီညီညွှတ်ညွတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာလည်း သာဓကတွေများစွာရှိပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအပါအဝင် မြန်မာနို်င်ငံတွင် ပညာရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၅ ဖွဲ့ကျော်မှ တာဝန်ရှိိသူများက တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့်အပြင် သတင်းဌာနအသီးသီးမှလည်း စာနယ်ဇင်းဆရာများကတက်ရောက်သတင်းရယူခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် ဥရောပသမဂ္ဂပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Johann Hesse၊ ADRA မြန်မာမှ Country Director Mr. Claudio Sandoval ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr Tin Maung Win၊ ADRA မြန်မာမှ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ John Mubonderi နှင့် ADRA UK မှ Senior Programmes Officer ဖြစ်သူ Milimo Ninvalle တို့ကအသီးသီးအဖွင့်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)၊ ADRA မြန်မာ၊ ADRA UK၊ ADRA Germany ၊ RISE တို့မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက စီမံကိန်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင်အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်တက်ရောက်လာသည့် DDG 'Danish Demining Group' မှ
Operations Manager Pascal Simon ကလည်း မြန်မာနို်င်ငံရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် မိုင်းအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း မိုင်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။